Kutanga chiziviso chepamutemo cheApple Watch Series 2 | Ndinobva mac
Kutanga chiziviso chepamutemo cheApple Watch Series 2
Anenge makore maviri mushure mekuratidzwa kwepamutemo kwemhando yekutanga yeApple Watch, iyo Cupertino-based kambani yakaratidza chizvarwa chechipiri chekambani smartwatch munaGunyana 7. Pakati pezvinhu zvitsva zvatinowana muchizvarwa chechipiri izvi pane processor nyowani, inopenya OLED skrini, yakabatanidzwa GPS pamwe nekusavhara mvura, kusvika pamamita makumi mashanu pakadzika. Kuti iite kuti isashome mvura, kunze kwekuisa chisimbiso chose pachigadzirwa, Apple yakachinja mutauri anoshandiswa mune yekutanga modhi yeanodzosera mvura uye akagadzirirawo kuramba kumanikidzwa nemvura.
Asi haisiriyo yega nhoroondo yatakaona maererano neApple Watch, sezvo Apple yakabatana neNike kuvhura Apple Watch Nike + (inowanikwa muna Gumiguru), modhi yakanyatsogadzirirwa vatambi uye zvakare inobatanidza yakatarisa yayo yega pamwe netambo yakasarudzika, iyo parizvino isingawanikwe kutenga zvakazvimiririra, chimwe chinhu chakafanana nezvakaitika netambo dzeHermès. Zvichida nekufamba kwenguva Apple ichakubvumidza kuti uzvitenge zvakasiyana, zvirinani inofanirwa.
Kujekesa izvo zvitsva zveApple Watch Series 2, kusanganisira iyo nyowani yeNike modhi, Apple ichangotumira kuYouTube uyeiye wekutanga chiziviso cheiyi modhi nyowani, iyo inoratidza kushandiswa kweApple Watch kuita chero mhando yekurovedza muviri. Vhidhiyo iyi inonzi "Go Time" inotiratidza mashandiro matsva akadai seGPS uye kushorwa nemvura, zvichiratidza mashandisiro atingaite kuApple Watch yedu, kungave mumitambo yedu yezuva nezuva, ichitikurudzira kufamba nguva zhinji. ..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kutanga chiziviso chepamutemo cheApple Watch Series 2
Ceramic Apple Yekutsvaga Yekutsikisa Unboxing
Apple, anopomerwa nezvebonde pamusasa wayo, anopindura kushoropodzwa